Shiinaha 99.8% AgNO3 nitrate qalin CAS 7761-88-8 warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Aragtida
99.8% AgNO3 nitrate lacag CAS 7761-88-8
Magaca Kiimikada: amooniyam lacag ah
Muuqaalka: budada cad ee cad
Qaaciddada Molecular: AgNO3
Fasalka: Fasalka Elektaroniga, Fasalka Warshadaha, Fasalka Daawada
Nooca: 99.8% min
Waxaa loo adeegsaday in lagu di'iyo ion chloride, iyo tixraaca shaqada ee loo yaqaan 'nitrate silver' ayaa loo isticmaalay in lagu qiyaaso sodium
Warshadaha aan dabiici ahayn waxaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo cusbada kale ee qalinka ah.
Warshadaha elektaroonigga ah waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro dhejisyo tabinta, wakiilo cusub oo lagu nadiifiyo gaaska,
Shaandhooyinka A8x molecular, dacwadaha cadaadiska isku midka ah ee qalinka lagu duubay iyo galoofyada hawlgalka korantada.
Warshadaha sawir qaadida waxaa loo isticmaalaa soo saarida qalabka sawir qaadida leh sida filimka filimka,
Filimka raajada iyo filim sawir leh.
Warshadaha dahaadhka waxaa loo isticmaalaa qalinka qalinka ee qalabka elektarooniga ah iyo farsamada gacanta kale.
Waxaa sidoo kale si ballaaran loogu isticmaalaa dahaarka lacagta muraayadaha iyo dahaarka dhalada dhalada.
Warshadaha bateriga waxaa loo isticmaalaa in lagu soo saaro baytariyada lacag-zinc ah.
Waxaa loo adeegsaday caafimaad ahaan sida loo isticmaalo sunta cayayaanka iyo mordants. Warshadaha kiimikada waxaa loo isticmaalaa rinjiyeynta timaha iyo wixii la mid ah. Kiimikada falanqaynta ee go'aaminta chlorine, bromine, iodicyanide iyo thiocyanate.
Waxaa loo adeegsaday dahaadh lacag la aan ah cyanide, sida qalinka sulphic acid acid, qalinka hydrochloride qalinka, ammonium diaminodisulfonic acid plating silver, silver sulfonyl salicylate plating as salt salt.
Waa isha laga helo ion lacag ah. Maaddada nitrate-ka ee qalinku waxay leedahay saameyn gaar ah oo ku saabsan is-gaarsiinta, kala-firdhinta
iyo xawaaraha roobka xal u dahaarka lacag. Qiyaasta guud waa 25-50g / L.
Xalka ammonia ee amooniyamka lacagta waxaa lagu yareyn karaa aldehydes iyo sonkorta wakiilka yareeya. Sidaa darteed, waa reagent loogu talagalay go'aaminta aldehydes iyo sonkorta. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa go'aaminta ion chloride, go'aaminta xayeysiinta manganese, korantada, sawir qaadista.
Budada cad ee cad
Ag ka kooban
Biyaha aan la milmi karin
HCL aan la dhigin
1kg / bac, 5kg / kartoon, 10kg / kartoon, 20kg / kartoon
Kaydinta waa inay ahaataa mid qabow, qalalan oo hawo leh.
Hore: 95% - 99.5% Fullerene C70
Xiga: tayo sare leh 99% Graphene
99.8% amooniyam lacag ah
Amooniyam lacag ah AgNO3
amooniyam lacag ah
Qiimaha wanaagsan Palladium sulfate cas 13566-03-5 Pal ...
Qiimo wanaagsan Ru 10.5% Tris (triphenylphosphine) rut ...
Qiimo wanaagsan 38% Rh Rhodium trichloride budada ca ...
Qiimaha wanaagsan PtCl4 Platinum tetrachloride CAS 134 ...